Abakhiqizi nabahlinzeki be-wall-mounted - i-china factory-mounted AP factory
I-WL8200-WH2 802.11ac Wave 2 In-wall Dual Band Enterprise AP
I-WL8200-WH2 iyi-wave engu-802.11ac 2 esekwe ngebhendi ephezulu yokusebenza okungenantambo (AP) esekela iphaneli ejwayelekile engama-86 ukufakwa okulula; ilungele amahhotela, ezemfundo, uhulumeni kanye namanethiwekhi ebhizinisi. Izici ezibalulekile nokugqamile Ukufinyelela kwe-wig ne-wireless kwe-WL8200-WH2 kuhlanganiswe amachweba amabili we-gigabit anezintambo, angahlangabezana ngokweqiniso nemfuneko yomkhawulokudonsa wamakhasimende angenantambo namachweba we-Ethernet amane we-gigabit asekela ukumiswa okuguquguqukayo kwe-VLAN, ...
I-WL8200-WL2 802.11ac In-wall Dual Band Enterprise AP
I-WL8200-WL2 ingama-802.11ac asetshenziselwa izindleko zokufinyelela ezingenantambo (AP) akhishwe yiDCN embonini yezokungenisa izihambi neyezemfundo. I-WL8200-WL2 isekela indinganiso engu-802.11AC, inani eliphelele lomkhawulokudonsa olutholakalayo we-733Mbps. (Ibhendi ye-2.4G inganikeza i-300Mbps bandwidth ne-5G band inganikeza nge-bandwidth engu-433Mbps). Izici Eziyinhloko nokuvelele Kulula ukusebenzisa i-WL8200-WL2 kungafakwa kuphaneli ejwayelekile engu-86, ingafakwa ngokushesha ngokulungisa izikulufo ezimbili, ngakho-ke ukufaka i-AP eyodwa nje ...
I-DCWL-2000WAP (R2) 802.11n i-AP enebhendi elilodwa-ebekwe odongeni
I-DCWL-2000WAP (R2) iyisizukulwane esisha esingama-802.11n esisezingeni eliphakeme sokufinyelela esingenantambo (AP) esikhishwe embonini yezivakashi nemfundo. I-DCWL-2000WAP (R2) isekela i-802.11n ejwayelekile, ibhendi eyodwa ye-2.4G engahlinzeka nge-bandwidth engu-300M. Ingafakwa kuphaneli ejwayelekile engama-86 ngaphandle kokwakhiwa kabusha kodonga futhi ubukhulu bayo buyi-22mme kuphela. Izici ezibalulekile nokuvelele okulula ukusetshenziswa - Ukufakwa okusheshayo i-DCWL-2000WAP (R2) ingafakwa kuphaneli ejwayelekile engu-86, coul ...